Ciidanka Asluubta dowladda KMG oo canbaareeyey dilkii shalay loo geeystay C/qaadir Yusuf Awliyo. | JILYAALE_ONLINE
Ciidanka Asluubta dowladda KMG oo canbaareeyey dilkii shalay loo geeystay C/qaadir Yusuf Awliyo.
Ciidanka Asluubta ee dowladda KMG ayaa canbaareeyey Maanta dilki shalay lagu qaarijiyey Gen. Yuusuf Cabdi Kaariye oo ka mid ahaa Ciidamada Asluubta ee dowladda KMG isla markaana ahaa madaxii xerada agoonta ee Wiilasha deegaanka Lafoole ee Gobolka Sh/Hoose.
Taliyaha Ciidamada Asluubta dowladda KMG Sareeye Guuto C/llaahi Macallin Cali oo Maanta shir jaraa,id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamay dilki shalay Qorax dhicii loo geystay Gen. C/qaadir Yuusuf Kaariye mid ay aad uga naxeen dhamaan Ciidanka Asluubta iyo kuwa Xooga dalka Soomaalia.
Taliyaha Ciidamada Asluubta ayaa sheegay in Sarkaalkan ka tirsanaa ciidamadiisa uu ka mid ahaa ciidamada Asluubta ee cusub ee kusoo biiray ciidamada Asluubta marki ay dalka soo caga dhigatay KMG isagoona awal ka mid ahaa Ciidamadii Asluubta ee Dowladihii soo maray dalka Soomaalia.
Gen. C/qaadir Yuusuf Kaariye (Awliyo) ayaa waxaa uu kusoo biiray Ciidanka Asluubta dalka Soomaalia sanadkii 1966 xidigtii ugu horeeysay waxaa loo xiray sanadkii 1981 waxaana uu ka mid ahaa Saraakiishii sare ee Ciidamada Asluubta dowladii Milatariga aheyd.
Marxuumka ayaa 18 sano ee lasoo dhaafay waxaa uu ahaa madaxa Xerada Agoonta Wiilasha Lafoole waxaana uu ka m id ahaa mudooyinkii dadnbe raga sida weyn ugu ololeeya dadka Barakaca ah ee kunool inta u dhaxeeyso Muqdisho iyo Afgooye.
Gen. C/qaadir Awliyo ayaa waxaa Maanta lagu aasay deegaanka LAfoole halkaas oo ay kaga qeyb galeen aaskiisa Boqolaal dadweeyne ah oo aad uga murugeysnaa dilka loo geeystay Marxuumka.
Alle ha unaxariistee C/qaadir Awliyo ayaa shalay waxaa toogasho ku dilay labo nin oo ku hubeesnaa Baastoolado kuwaasi oo wadnaha rasaas kaga garaacay meel udhaw gurigiisa oo ku yaalo deegaanka Lafoole ee Gobolka Sh/Hoose.
← Wareegto kasoo baxday Taliska Ciidanka Boliska oo Saraakiil cusub loogu Magacaabay Gobolka Sh/Hoose.
Salaad Cali Jeelle oo sheegay in uusan wax dembi ah kagelin Shacabka Soomaaliyeed xilligii uu ahaa.. →